Dhaamsa Jaal Abdii Raggaasaa: “Jabaadhaa hojii qabsoo saba bal’aa kana gitu hojjedhaa malee hojii sabni bicuun hojjetee argatu faarsaa hin ooliinaa!” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa Jaal Abdii Raggaasaa: “Jabaadhaa hojii qabsoo saba bal’aa kana gitu hojjedhaa malee hojii sabni bicuun hojjetee argatu faarsaa hin ooliinaa!”
“Jabaadhaa hojii qabsoo saba bal’aa kana gitu hojjedhaa malee hojii sabni bicuun hojjetee argatu faarsaa hin ooliinaa!”
Dhaamsa Jaal Abdii Raggaasaa.
Guyyaan har’aa eebbifamaadha. Guyyaa hayyuu siyaasaa Oromoo fi qabsaa’aa jabaa Oromoo, hoggana ABO waliin oolledha. Gorsaa cichoominaa, fakkeenya dhalootaa, abbaa xiiqii, onnataa, hubataa waa maraa Jaal Abdii Raggaasaa waliin sa’aatii lama miti daqiiqaa lama waliin turuunuu barnoota guddaadha.
Har’a (Caamsaa 29/2021) mana hidhaa Sabbataa (Daalattii) deemnee Jaal Abdii Raggaasaa fi hidhamtoota Oromoo kaan dubbisne. Barfannee waan deemneef sa’aatii duraa nu seensuu didan. Sa’aatii booda eeggachuun dirqama taanaan eegne. Akkuma sa’aatiin ga’een seennee Jaal Abdii waamsifannee arganne.
Fuula ifaatiin nutti dhufe. Nama guddaa kana hidhamaan mooraa sanaafi raawwachiistonni dhimmaa baay’ee isa jaallatu; kabaju. “Jaal Abdii” jedhanii waamu hunduu. Namni Jaal Abdii gaafachuu deemes ni kabajama. Qofaatti bakka nuuf kennanii teessumni dhufee waliin haasofne.
Waa’ee nageenya Oromiyaa, waa’ee sochii dhaabaa (ABO), waa’ee lola Tigiraay, waa’ee jeequmsa gaanfa Afrikaa, sochii mootummoonni Addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti taasisaa jiran dabalatee waan baay’ee kaafne.
Haala hidhamtootaa irratti dubbanne. Jaal Abdiin namni magaalaa Finfinnee keessatti qabame hedduun isaa sababa bilbila harkasaarra jiruutiin akka qabame aaranii dubbatu. “Namni fayyaa qabu bara teknoloojiin guddataa jiru kanatti akkamitti qajeelfama hojii qabsoo bilbilaan waliin dubbata?” jedhan. Kanas himata namoota hidhamanitti dhiyaatee dubbifamu dhaga’anii akka hubatan nuuf himan. Of eeggannoo cimaan karaa bilbilaan taasifamuu akka qabuufi hojii qabsoof bilbila fayyadamuun barbaachisaa akka hin taane ibsan.
Waa’ee dhaddacha hordofaa jiranii kaasne. Himatni kaan kufaa ta’ee “Amaan Filee ajajjee karaa isaatiin nama ajjeesiftee, gubsiifte” jedhanii kan himatamaniif ragaa ittisaa akka dhiyeessan manni murtii ajajee Jaal Abdii fi abukaatonni isaanii waliin ta’anii ragoolii ittisaa nama 12 akka dhiyeessan himani. Ragooliin kun akka dhiyaataniif manni murtii yeroo afur poolisiitti ajaja kenneera. Poolisiin garuu dhiyeessuu hin dandeenye. Jimaata dhufu (Waxabajji 5/2021) dhaddacha 47’ffaa akka dhiyaatan dubbatan Jaal Abdiin. Amma dura yeroo 46 dhiyaatanii murtiis haqas hin arganne.
Beellama dhufu irratti yoo bilisa naan jedhanis gara Awaash Aarbaa deemnee haaromsa fudhachuun hin hafu akkuma Kol. Gammaxhuufaa. (kolfa guddaa kolfan).
“Lolli Tigiraay xiyyeeffannoo argatee addunyaan Itoophiyaarratti xiyyeeffatte. Oromoon utuu miidhamuu sagaleensaa hin dhaga’amu” jennee dubbanne. Kun Jaal Abdii hin ajaa’ibne. “Isin hojii hin hojjennekaa; Tigiraay hojii qabsoo hojjetanii gurra argatan” nuun jedhan. Ni dhaggeeffanne. “Oromoon keenya kun miidiyaafi walga’ii irraa dubbachuu malee jaarmiyaa ijaaruufi hojii jaarmiyaa hojjechuu hin jaallatu” jedhan. “Itti jabaadhaa, itti cichaa hojii jaarmiyaa hojjedhaa malee injifannoo saba bicuu hafarsaa hin ooliinaa” jedhan. Amerikaanis Awurooppaanis, Waaqayyoyyu yoo jabaatte malee gurra siif hin kennani jedhani. Waa’ee fayyaa isaanii dubbanne.
Dhibee dhiibbaa dhiigaan akka rakkatan nuuf himani. Dabalataanis Saayinesiin akka isaan rakkisu nuuf himan.
Kolfa Jaal Abdii arguun nama gammachiisa. Yeroo nama gorsan sagaleen isaanii nama marara. Guyyaan har’aa kun utuu dheerateera ta’ee nama jechisiisa.
Tigray and horn of Africa update
Amaallee Iyyannaan Warra Kanaa Birmannaa Hin Argannee Godina Booranaa Aanaa Miyoo Ganda Gombisaa Araddaa Goda Gootu tii Lubbuu isaanii baafachuuf Kenya ti Baqatanii Namni ykn Dhaabbanni Garagalee Ilaale Hin Jiru. Beelaa , qabbana, Bokkaa, Biinii ykn Bookee Busaan Rakkachaa Jiru. Edda Qe’eef Qabeenya Isaanii irraa Buqqa’anii Amma Torbee Lama Darbuufi. Warri Mana Keessaa Firaashii ykn Godoroo dansaa irra Raftani Soofaa Gaarii irra Teessanii Waan Gaarii Nyaatanii Bultan Warra Kanaa Yoo Waa Gochuufii dadhabdan Waaqa Ykn Rabbi keessaan Kadhaaf. Ijoollen Agartan Kun Ala bulaa Jiru.
Share Godhaa. Nagaan Bulaa Nagaan Oolaa.
Tigray war: Can guerilla war strategy work?